Football Khabar » रोनाल्डोलाई नेइमारको ‘चोट र भविष्य’को चिन्ता !
रोनाल्डोलाई नेइमारको ‘चोट र भविष्य’को चिन्ता !
हाल इटालियन युभेन्टसबाट खेलिरहेका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ब्राजिलियन नेइमारको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा स्पेनमा कट्टर प्रतिस्पर्धी भएर खेले पनि नेइमार र रोनाल्डोबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ ।
सन् २०१७ मा विश्वकीर्तिमानी मूल्य २२२ मिलियन युरोमा बार्सिलोना छाडेर पिएसजी पुगेका नेइमार हाल पेरिस छाड्ने तयारीमा रहेको चर्चा अझै पनि छ । उनी पूर्वक्लब बार्सिलोना फर्किने चर्चा छ ।
हालै रोनाल्डोले एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै नेइमारको अवस्था र उनको भविष्यबारे धारणा राखेका छन् । रोनाल्डोले नेइमार पछिल्ला वर्ष पटक–पटक चोटले थलिँदा करिअरमा असर पुगेको बताएका छन् । साथै, रोनाल्डोले नेइमार पेरिस नै बस्न सक्ने पनि भनेका छन् ।
‘बजारका धेरै कुरा मलाई थाहा छैन । उनी एक ठूला खेलाडी हुन् । म उनलाई निकै राम्रोसँग जान्दछु । बजारमा त उनीबारे थुप्रै चर्चा छन् । जस्तो कि, उनी बार्सा, मड्रिड वा जुभे जहाँ पनि जान सक्छन् आदि–आदि,’ रोनाल्डोले भने ।
उनले अघि थपे, ‘तर, यो त मिडियाको काम नै हो । किनभने, उनीहरूले पेपर बेच्नुपर्छ । र, मसाला चाहिन्छ । तर, मेरो विचारमा नेइमार पेरिसमै बस्नेछन् ।’
रोनाल्डोले यदि नेइमारले पिएसजी छाडे उनले आफूलाई जहाँ सहज लाग्छ त्यहाँ जानुपर्ने बताए । ‘यदि उनी साँच्चै पेरिस छाड्दैछन् भने उनले त्यस्तो ठाउँ खोज्नुपर्छ, जहाँ उनी मनैबाट खुसी हुन सक्छन् । र, आफ्नो फुटबलको स्तर देखाउन सक्छन् ।’
रोनाल्डोले नेइमारको चोटप्रति पनि दुःख व्यक्त गरे । ‘मलाई चिन्ता लाग्छ, उनी लामो समय चोटसँग पटक–पटक जुध्दै आएका छन् । जो कोही खेलाडीका यस्ता चोट निकै ठूला पीडा हुन्छन्,’ रोनाल्डोले भने, ‘म आशा राख्छु, अब उनका चोटका दिन सकिउन् ।’
प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १३:५७